အကြင်နာနန်းတော်: photoshop့  ဒီဇိုင်းဆိုက်ဒ်များ
5 Aug 11, 07:24 PM
aung min ko: photoshop အသုံးပြုပုံ စာအုပ် လေး ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကိုလေး..ဖိုတိုရော့ခ် သင်ခန်းစာများကို အစအဆုံးသိချင်ပါတယ် တင်ပေးပါခင်ဗျာ့..
ချစ်လေးသူ ဧကရီရေ ဓါတ်ပုံပညာ နဲ့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း ပညာလေးတွေ တင်ပေးပါလားရှင်
အကြင်နာနန်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်း အကျိုးရှိစေမဲ့ စာပေဗဟုသုတများ နည်းပညာများ တစ်ခုမဟုတ်
တစ်ခုရပြန်သွားစေချင်တဲ့ စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ကြိုးစားလျှက်ပါ..လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်.
ခုဆို နန်းတော်ရဲ့ အကူအညီတောင်းရန် မှာ ဖိုတိုရှော့ခ် နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ မေးမြန်းထားတာလေးတွေ ခနခနတွေ့ နေရတာမို့.
ဖိုတိုရှော့ခ် နဲ့ လုံးဝ စိမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကော အသုံးဝင်စေမဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ဧကရီ လုပ်ချင်ပါသေးတယ်.
ဖိုတိုရှောခ် သင်ခန်းစာတစ်ခုကို အစအဆုံးပို့ချသွားချင်ပါတယ်..ပညာရှင်တွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်..
ဖိုတိုရှော့ခ်ပညာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ မိမိသိရှိသမျှကို ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့ စေတနာ့ ၀ါသနာရှင် များကို ဧကရီ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်..
ဧကရီ ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါနော်..
ခုလောလောဆယ်တော့ လေ့လာစုဆောင်းထားတာလေးတွေပဲ အရင်မျှဝေသွားပါရစေရှင်...
ဖိုတိုရှော့ခ် ၀က်ဆိုက်ဒ်များနှင့် ဒီဇိုင်းဆိုက်ဒ်များ